आफूलाई चलाएको नयाँ औषधिको ‘प्रभाव’ हेर्न प्रधानमन्त्री ओली सिंगापुर जाँदै ? | Nepali Health
२०७६ भदौ ४ गते १७:३५ मा प्रकाशित
काठमाडौँ, ४ भदौँ । सिंगापुरबाट उपचार गरी फर्किएको १० दिन पछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विहिबार (भोली) पुन त्यसतर्फ लाग्दैछन् । बिहीबार दिउसो थाइ एयरको नियमित उडानबाट उनी त्यसतर्फ लाग्ने बताइएको छ । तर उनको स्वास्थ्य अवस्था के हो अहिलेसम्म बताइएको छैन ।
उनी आफैले र उनका सहयोगीहरुले हल्ला चलेजस्तो समस्या नभएको बताउँदै आएका छन् । त्यसो हो भने उनी यति छिटै किन फेरी सिंगापुर दौडनुप¥यो ? चासो राख्ने आम सर्वसाधारणले सोझो प्रश्न राख्ने गरेका छन् ।
क्याविनेट चिकित्सकको रुपमा नियुक्ति पाएकी मिर्गौैला रोग विशेषज्ञ प्राडा दिव्या सिंह शाह प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यको बारेमा बोलेकी छैनन् । बरु उनको टिममा रहेका एक जना सदस्यले केही दिन अघि नेपाली हेल्थसंग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यमा अपेक्षित सुधार नदेखिएको र चाडै नै बाहिर लगिने भनेर खुलासा गरेका थिए । तर त्यसपछि उनलाई पनि प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यको बारेमा बोल्न दिइएको छैन ।
त्यसो त प्रधानमन्त्रीको दैनिकी हेर्दा उनीमा ठूलो समस्या छ जस्तो देखिदैन् । पछिल्ला दिनमा ओलीकै सक्रियतामा पार्टी भित्रको राजनीतिक गाँठो खुकुलो पार्ने प्रयास गरिएको छ ।
उनकै अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद बैठक बसेको छ । केही सार्वजनिक समारोहमा समेत उनी उपस्थित भई आफ्नो स्वास्थ्यबारेमा समेत बोलेका छन् ।तर बाहिर बोले जस्तो मात्रै उनको समस्या होइन भन्ने धेरैको अनुमान छ ।
उपचारमा सम्लग्न एक जना चिकित्सकका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीको मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिहाल्नुपर्ने अवस्थामा पुगिसकेको छैन । ‘बरु समस्या प्रारम्भिक अवस्थामै समाधान गर्न चिकित्सकहरुले नयाँ औषधि चलाएका छन् ।
यसअघि सिंगापुर जाँदा उहाँको औषधि परिवर्तन गरिएको हो । तर चिकित्सक टोलीले सो औषधिको प्रभाव हेर्न पाइरहेको छैन । यसपटक सिंगापुर जानुको मुख्य कारण यहि नै हो,’ उनले भने ।
यसपटक करीब १० दिन जति बस्नुहुन्छ होला । सचिवालयका एक सदस्यले भने, ‘शरीरमा एन्टीबोडिज पो बन्न थाल्यो कि ? के के साइड इफेक्ट देखियो । त्यसको अध्ययन हुन्छ सायद । र यो अघिल्लो पटकको उपचारको निरन्तरता हो । ‘
यसअघि नै चिकित्सकले थप आठ दश दिन सिंगापुर मै रहन आग्रह गर्दा विरामी मात्रै नभई देशको प्रधानमन्त्री भएको र यति लामो समय विदेश बस्न छुट्टि नलिएको अघिल्ला टोलीका एक जना सदस्यले भने । अहिले त्यहि बाँकी परीक्षण तथ ा उपचारका लागि त्यस तर्फ जान लागेका हुन् ।
स्वास्थ्यबाट विदाई भए सचिव थपलिया